Tababar Unai Emery Oo Raaci Doona Habka Hogaamiye Tijaabinta Macalinka Qaranka Brazil Ee Tite – Immisa Hogaamiye Ayuu Doonayaa? – Laacib.net
Tababaraha cusub ee Arsenal Unai Emery ayaa doonaya inuu helo shan kabtan oo awood u leh iney wax hogaamiyaan isagoo u maraya habka hogaamiye tijaabinta uu sameeyay tababaraha qaranka Brazil Tite.
22-sano kadib Arsenal waxaa isaga tagay tababare Arsene Wenger kaas oo waqti qurux badan iyo mid xun intaba lasoo qaatay kooxda, sidoo kale Per Mertesacker ayaa siibay kabaha kubadda cagta isla markaana ka mid noqday shaqaalaha kooxa waliba qeybta lagu barbaariyo ciyaartoyda.
Sidaas darteed Unai Emery wuxuu doonayaa inuu xoojiyo maskax ahaana ciyaartoydiisa si uusan u noqon mid jamaahiirta soo xasuusiyay tababarahii ay codsadeen in la ceyriyo ee Arsene Wener.
Gunners waxaa kusoo biiray Stephan ­Lichtsteiner oo 7-jeer la hantay Juventus horyaalka talyaaniga, sidoo kalana ah kabtankii Switzerland muddo badan iyo daafaca waaya aragga ah ee qaranka Grece Sokratis Papastathopoulos.
Macalinka reer Spain wuxuu qiray in Laurent Koscielny uu yahay kabtankiisa isla markaana uu mar walba ku xushmeyn doono, balse inta sanadka ka dhiman maqnaashahiisa ay sababi doonto iney tijaabin doonaan dhawr kabtan isagoo siin doona ay isku muujiyaan waqtiga qolka labiska iyo gudaha garoonkaba.
“Fikradeyda waxey tahay inaan ogaado qof walba iyo shaqsiyadiisa” ayuu yiri Unai Emery oo aad ugu dhiban wali luqadda Ingiriiska balse sameeyay hormar fiican.
“Kadib fikradeyda koowaad waxey tahay inaan kooxda u helo shan hogaamiye, balse waqtigaan ma garan karo magacyadooda”
“Koscielny waa kabtanka koowaad, waa inaan xushmeeyo, kadib waxaan raadineynaa shaqsi ahaan aad ugu fiican qolka labiska”
“Waxaan doonayaa iney kooxda hesho kalsooni, shaqsiyad iyo awood, waxaan doonayaa iney kulan walba noqdaan horjoogeyaal, waxaan doonayaa in ciyaartoyda dhan ay soo bandhigaan tayadooda garoonka iyo xerada tababarka”